Ndepụta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi: Nzọụkwụ 10 Iji Nwee Nsonaazụ Ka Mma | Martech Zone
Ka m na-eso ndị ahịa na-arụ ọrụ na mgbasa ozi ahịa na atụmatụ ha, ana m ahụkarị na enwere oghere na mgbasa ozi ahịa ha na-egbochi ha izute ikike ha kachasị. Findingsfọdụ nchoputa:
Enweghị nghọta - Ndị na-ere ahịa na-agakarị nzọụkwụ na njem ịzụta nke anaghị enye nghọta ma lekwasị anya na ebumnuche nke ndị na-ege ntị.
Enweghị nduzi - Ndị ahịa na-arụ ọrụ dị ukwuu n'ịmepụta mkpọsa mana ha anaghị echefu ihe kachasị mkpa - na-agwa ndị na-ege ntị ihe ha kwesịrị ime ọzọ.
Enweghị ihe akaebe - ntinye nke ihe akaebe, ọmụmụ ihe, nyocha, nyocha, nyocha, nyocha, wdg. Iji kwado atụmatụ mkpọsa gị.
Enweghị mmesho - hụ na ị nwere ụzọ iji tụọ usoro ọ bụla na mkpọsa yana nsonaazụ ya niile.
Enweghị ule - na-enye onyonyo ndị ọzọ, isi okwu, na ederede nke nwere ike ibuli elu na mkpọsa ahụ.
Enweghị nhazi - ndị na-ere ahịa na-ebutekarị mkpọsa na silo kama ịhazi ndị ọzọ na-ajụ ndị ọzọ na ọwa iji kwalite mkpọsa ahụ.
Enweghị atụmatụ - n'ozuzu… nsogbu kachasị na ọtụtụ mkpọsa nke na-ada dị mfe - enweghị atụmatụ. Ka ị na - eme nyocha ma hazie mkpọsa ahịa gị, ihe ga - esi na ya pụta.
M na a na-emepe emepe ihe na-ina dijitalụ ahịa usoro ọmụmụ na a mahadum mahadum iji nyere ulo oru aka mejuputa Filiks iji merie ndị a gaps. Ọ dabere na usoro m mepụtara maka ndị ahịa anyị edere nke ọma na nke anyị Njem Azụ ahịa Agile.
Tinyere njem ahụ, achọrọ m ka azụmahịa na ndị ahịa nwee usoro mgbe ha na-anọdụ ala ịhazi atụmatụ ọ bụla. Akpọrọ m ndepụta nyocha a Ndepụta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi - ọ bụghị naanị na mkpọsa, ọ bụ maka mbọ ahịa ọ bụla ị mere, site na tweet na vidiyo onye nkọwa.
Ebumnuche nke ndebanye aha abụghị iji nye usoro edepụtara edepụtara kpamkpam. Dị ka onye nyocha ụlọ ọrụ na-eji nyocha iji hụ na ha anaghị agbaghara otu usoro, azụmahịa gị kwesịrị itinye akwụkwọ nyocha maka mkpọsa ma ọ bụ mgbasa ozi ọ bụla ị na-etinye.
Nke a bụ ndepụta nke ajụjụ a ga-aza maka ọ bụla ahia ahia.
Ndepụta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi:
Gịnị bụ ndị na-ege ntị maka mgbasa ozi ahịa a? Ọ bụghị naanị onye… ihe na-agụnye onye, ​​onye ha, ọkwa ha na njem ịzụrụ, yana iche echiche banyere etu mkpọsa gị si dị elu karịa mkpọsa ndị asọmpi gị.
Ebee ka ndị na-ege ntị nọ maka mgbasa ozi ahịa a? Ebee ka ndị a na-ege ntị bi? Kedu usoro na ọwa ị kwesịrị iji jiri mee ihe nke ọma iji ruo ndị na-ege gị ntị ntị?
Kedu ihe onwunwe ọ ga-adị mkpa ka ekenye mkpọsa ahịa a? Chee echiche banyere ndị mmadụ, usoro, na nyiwe ndị ịchọrọ iji jikwaa mkpọsa ahụ nke ọma. Enwere ngwaọrụ ndị nwere ike inyere gị aka ịbawanye nsonaazụ gị?
Kedu ihe akaebe ị nwere ike itinye na mkpọsa gị? Jiri ikpe, akaebe ndị ahịa, asambodo, nyocha, ọkwa, na nyocha… kedu nkwado ndị ọzọ ị nwere ike itinye iji merie nsogbu ntụkwasị obi ọ bụla gbasara ika ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị iji kewaa gị na asọmpi gị?
Enwere mbọ ndị ọzọ ị nwere ike ịhazi iji bulite nsonaazụ atụmatụ a? Ọ bụrụ na ị na-emepe akwụkwọ ọcha, ị nwere post blọọgụ, ọkwa mmekọrịta ọha na eze, blọgụ kachasị mma, nkekọrịta mmekọrịta, ma ọ bụ nkesa mmetụta… kedu usoro mgbasa ozi na ọwa ndị ọzọ enwere ike itinye iji bulie nloghachi gị na itinye ego mkpọsa gị?
Egosiputara oku ka emee nke oma? Ọ bụrụ na ị na-atụ anya ka ebumnuche gị mee ihe ọ bụla, jide n'aka na ị ga-agwa ha ihe ị ga-eme ọzọ wee debe atụmanya maka ya. Na mgbakwunye, ị nwere ike iche maka CTA ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ha adịchaghị njikere itinye aka n'ụzọ zuru ezu n'oge a.
Kedu ụzọ ị nwere ike isi tinye iji megharịa ndị na-ege gị ntị? Atụmanya gị nwere ike ọ gaghị adị njikere ịzụrụ taa… ị nwere ike itinye ha na njem na-azụlite? Tinye ha na listi email gị? Gbuo ha mkpọsa ịgbahapụ ụgbọ ibu? Iche echiche ka ị ga-esi megharịa ndị na-ege gị ntị ga-enyere gị aka mejuputa azịza tupu oge agafee.
Olee otú anyị ga-esi ama ma ihe a ọ na-eme ọ̀ gara nke ọma? Na-agbakwunye pikselụ nsochi, URL mkpọsa, ntughari ntughari, nsochi mmemme… leverage akụkụ ọ bụla nke nyocha iji tụọ nzaghachi ị na-enweta na mkpọsa gị nke ọma ka ị ghọta otu esi emeziwanye ya.
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji hụ ma atụmatụ a ọ gara nke ọma? Ugboro ole ka ị ga-elegharịgharị mkpọsa gị iji hụ ma ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ, mgbe ị nwere ike igbu ya ma ọ bụ megharịa ya ma ọ bụ kwalite ya na-aga n'ihu.
Kedu ihe anyị mụtara site n'ịzụ ahịa ahịa nke a nwere ike itinye n'ọrụ na-esote? Ị nwere ọbá akwụkwọ mgbasa ozi ahaziri nke ọma nke na-enye gị ndụmọdụ ka ị ga-esi meziwanye mkpọsa gị ọzọ? Inwe ebe nchekwa ihe ọmụma dị mkpa maka nzukọ gị ka ị ghara ime otu ihe ahụ mehiere ma ọ bụ wepụta echiche ndị ọzọ maka mgbasa ozi ọzọ.
Ire ahia bu ihe banyere mmuta, ikike, na oganihu n’iru. Zaa ajụjụ 10 a na mgbasa ozi ahịa ọ bụla ma ana m ekwe nkwa na ị ga-ahụ nsonaazụ ka mma!
Enwere m olile anya na ị ga-enwe ọ theụ na akwụkwọ ọrụ ka ị na-aga n'ihu na ebumnuche gị, mee ka m mara ka o siri nyere gị aka!
Budata Ndepụta Atụmatụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Tags: ndị na-ege ntịnyochadownloadfree downloadmarketingmgbasa ozi ahịandebanye ahịa mkpọsa ahịangbado ahia ahia ahiandenye ahia ahiaahia ahiapdfpdf nbudata
Septemba 28, 2017 na 5:27 ehihie
Doug mara mma nke ukwuu - nnukwu ngwá ọrụ (ka m nwere ike pịgharịa na tweak !!)
Mar 1, 2021 na 4: 44 AM
Sir ị nwere ike ịnye ọzụzụ ịzụ ahịa dijitalụ n'efu?
Mar 1, 2021 na 11: 10 AM
Ndewo Sampada, ọ dị m nwute mana enweghị m oge ma ọ bụ akụrụngwa iji mee nke a!